လက်လီအရောင်းဆိုင်များကိုပိတ်သိမ်းတော့မယ့် Microsoft | Myanmar Mobile App
Home Trending Enterprise လက်လီအရောင်းဆိုင်များကိုပိတ်သိမ်းတော့မယ့် Microsoft
People walk pastaMicrosoft store entrance with the company's logo on top in midtown Manhattan at the 5th avenue in New York City, US, on 11 November 2019. Microsoft Corporation is world's largest software maker dominant in PC operating system Microsoft Windows, office applications, web browser and communication market. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကတော့ ၎င်းရဲ့ထုတ်ကုန်များကို စတိုးဆိုင်များဖွင့်လှစ်၍ ရောင်းချပေးနေခြင်းကို အရှုံးပေးလိုက်ပါပြီ။ Experience Center များအနေဖြင့်သာချန်ထားခဲ့မည့် နေရာ ၄ ခု မှလွဲ၍ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ Microsoft Store နေရာများအားလုံးကိုအမြဲတမ်းပိတ်သိမ်းရန်အစီအစဉ်များကို ဒီနေ့ပဲထုတ်ပြန်ကြေငြာထားပါတယ် ။
Experience Center အဖြစ်ချန်ခဲ့မယ့် နေရာ ၄ ခုကတော့ နယူးယောက်စီးတီး (ပဉ္စမ Ave)၊ လန်ဒန် (အောက်စ်ဖို့ဒ်ဆပ်ကပ်)၊ ဆစ်ဒနီ (Westfield Sydney) နှင့် Redmond ကျောင်းဝင်းတည်နေရာများဖြစ်သည်။ လန်ဒန်စတိုးဆိုရင် ဖွင့်ထားတာ တစ်နှစ်ခန့်သာရှိပါသေးတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ Microsoft Store အားလုံးတည်ရှိရာနေရာအားလုံးကိုပိတ်ပစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်လီရောင်းဝယ်မှုကိုရှေ့သို့တိုး၍ အာရုံစိုက်သွားမည်ဟုဆိုသည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ပြောကြားချက်အရ Microsoft.com နှင့် Xbox နှင့် Windows တို့ရဲ့ Online စတိုးများသည်စျေးကွက်တည်နေရာ ၁၉၀ တွင်လစဉ်သုံးစွဲသူ ၁.၂ ဘီလီယံအထိရှိသည်ဟုဆိုသည်။
Previous articleSD765 အသုံးပြုထားတဲ့ 5G စမတ်ဖုန်း OPPO Find X2 Lite 5G ကို ကြေညာ
Next articleAukey key series T18NC True Wireless ANC Earbuds ဖြင့် တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းခြင်း အတွေ့အကြုံ